ရယ်စရာနှင့်မူရင်းမွေးနေ့နှုတ်ခွန်းဆက်သ! | ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ
လူတစ် ဦး ၏မွေးနေ့သည်အကြောင်းရင်းနှစ်ခုကြောင့်အရေးကြီးသောအရာမရှိချေ။ အကြောင်းမှာအကြောင်းပြချက်နှစ်ခုကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထိုနေ့တွင်မိခင်ဖြစ်သူသည်သူ့ကိုကမ္ဘာကြီးသို့အားစိုက်ထုတ်ပြီးနာကျင်မှုများစွာဖြင့်ခေါ်ဆောင်လာခဲ့သည်။ ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာလူတစ်ယောက်ဟာသိတဲ့လူအားလုံးရဲ့ ၀ မ်းမြောက်မှုနှလုံးသားကိုဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့အချိန်ပါ။ မွေးနေ့ကိုကျင်းပသင့်ပြီးဂုဏ်ပြုခြင်းဖြင့်စတင်ခြင်းထက်ပိုကောင်းသောနည်းလမ်းမရှိပါ။ ဒီပျင်းစရာမဖြစ်ဖို့ရယ်စရာကောင်းတဲ့မွေးနေ့ပွဲကိုဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာသိဖို့လိုတယ်၊
လူမှုရေးကွန်ယက်များဖြင့်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ သို့သော်သင်အလွန်ဂုဏ်ယူ ၀ မ်းမြောက်စွာ ၀ မ်းနည်းမိသည်။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်နံရံမှာရိုးရှင်းတဲ့ 'ဂုဏ်ပြုလွှာ' တွေထည့်တဲ့သူတွေရှိတယ်၊ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကသူတို့အဆက်အသွယ်၏မွေးနေ့ဖြစ်သည်ဟုသူတို့ကိုသတိပေးသောကြောင့်သူတို့က၎င်းကိုထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ဒီတော့ဒါကအရမ်းအေးလွန်းလွန်းတယ် ... ဟုတ်တယ်၊ သူတို့မွေးနေ့မှာတခြားသူတွေရဲ့နံရံပေါ် 'ဂုဏ်ပြုလွှာ' တင်ရန်စက္ကန့်အနည်းငယ်ကြာသော်လည်း၊ အကယ်၍ ထိုသူသည်သင့်အတွက်တကယ်အရေးပါသည်ဆိုလျှင်၊ အနည်းငယ်မျှပို။
3 WhatsApp ကိုပိုကြိုက်နှစ်သက်လျှင်
5 နှုတ်ခွန်းဆက်ဘို့ 15 ရယ်စရာမက်ဆေ့ခ်ျကိုစိတ်ကူးများ
ရှင်းနေသည်မှာလူတိုင်းသည်ကမ္ဘာကြီးဖြစ်ပြီးသင်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်အရာမှာသင်၏သူငယ်ချင်း၊ မိသားစုဝင်၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၊ ကလေးများအားမကြိုက်နှစ်သက်ရန်မလိုပါ။ မင်းရဲ့သူငယ်ချင်းကရိုးရာရိုးစင်းပြီး၊ လုံးဝမလူတစ် ဦး အတွက်ဖြစ်နှင့်။
ဒါကြောင့်ရယ်စရာကောင်းသောမွေးနေ့နှုတ်ခွန်းဆက်စကားမှန်ကန်စေရန်သင်မွေးနေ့မရောက်မီထိုင်။ သင်နှစ်သက်သောသူနှင့်မနှစ်သက်ရာကိုစဉ်းစားလိုသူကိုစဉ်းစားရမည်။ သူကသူတစ်ခုခုကြိုက်လား၊ မကြိုက်ဘူးလားမသိဘူးဆိုရင်သူကသူ့ကိုအလုံအလောက်ကောင်းကောင်းမသိလို့ဖြစ်လို့ပိုပြီးယေဘူယျတစ်ခုခုကိုစဉ်းစားရလိမ့်မယ်။
အကယ်၍ သင်သည်လူမှုကွန်ယက်များကိုကြိုက်နှစ်သက်လျှင်ပျော်စရာကောင်းသောလမ်းဖြင့်ဂုဏ်ပြုခြင်းသည်ကောင်းသောအကြံဖြစ်သည်။ လူမှုကွန်ယက်များသည်ရိုးရှင်းသော 'ဂုဏ်ပြုလွှာ' ဖြင့်မဟုတ်ဘဲကျွန်ုပ်တို့အားနည်းလမ်းများစွာဖြင့်ဂုဏ်ပြုရန်အခွင့်အရေးပေးသည်။ သင်၏အသိအကျွမ်း၊ သူငယ်ချင်း၊ မိသားစု ၀ င်များကိုချီးကျူးရန်ကောင်းသောစာသားကိုစဉ်းစားခြင်းအပြင် ... ရယ်စရာကောင်းသောကဒ်ပြားတစ်ခုကိုလည်းနံရံတွင်သင်ထည့်နိုင်သည်။ ကဒ်သည်ငြိမ်နေနိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာအတွင်းဖက်၌ရယ်စရာကောင်းသောစာတစ်စောင်ပါသောကဒ်သို့မဟုတ်ခေတ်မီစွာခေတ်မီနေသော GiF ကဲ့သို့ရွေ့လျားကဒ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒီမှာ မင်းမှာအကြံဥာဏ်တွေရှိတယ်၊ ဒါကြောင့်ရယ်စရာမွေးနေ့ပွဲကိုမင်းဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ် မင်းကိုချစ်မယ် (ထို့အပြင် WhatsApp သို့မဟုတ်အီးမေးလ်ကဲ့သို့သောအခြားဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းများဖြင့်လည်းပို့နိုင်သည်၊ သင်၏ကိုယ်ပိုင်ကဒ်ပြားကိုကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ရန်ပုံနှိပ်နိုင်သည်။ )
WhatsApp ကို Facebook ကဲ့သို့လူမှုကွန်ယက်များထက်ပိုမိုအသုံးပြုလိုသူများရှိသည်။ မွေးနေ့ကောင်လေးသည်အသင်း ၀ င်တစ် ဦး အနေဖြင့်ဖြစ်သော WhatsApp ၏သူငယ်ချင်းများအဖွဲ့တွင်သင်ကသီးသန့် (သို့) သေးငယ်သောကော်မတီတစ်ခုအဖြစ်သင်လုပ်လျှင်၎င်းသည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စဖြစ်သည်။
WhatsApp တွင်ရယ်စရာစကားစုကို GiF နှင့်အတူပါ ၀ င်သောပုဂ္ဂလိကသတင်းစကားတစ်ခုအဖြစ်ထည့်နိုင်သည်။ မွေးနေ့ကတ်တစ်ခုပို့ပေးနိုင်သည်။ ရယ်စရာကောင်းသောအသံတစ်ခုကိုသူ့ကိုဂုဏ်ပြုနိုင်သည်။ သို့မဟုတ်ပင်၊ သူ့ကိုသင်၏အဆင့်အတန်းနှင့် ပတ်သတ်၍ နောက်ဆုံးသတင်းများဖြင့်ချီးကျူးပြီးဤအသေးစိတ်အချက်အလက်များသည်သူနှင့်သူမအတွက်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းသူနားလည်စေနိုင်သည်။
ပိုပြီးရိုးရာရိုးသားပြီးရယ်စရာကောင်းသောမွေးနေ့လက်ဆောင်ကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျနှစ်သက်သူများရှိသည်။ လူမှုကွန်ယက်များအသုံးပြုခြင်းဖြင့်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ဆက်သွယ်ခြင်း၊ အသက်ရှင်ခြင်းသည်မည်မျှအရေးကြီးကြောင်းကျွန်ုပ်တို့မေ့နေပုံရသည်။ သင်ကိုယ်တိုင် WhatsApp သို့မဟုတ်လူမှုရေးကွန်ယက်များမှတစ်ဆင့်သင့်ကိုမချီးမြောက်ပါက၎င်းသည်အတူတူမဟုတ်ပါ။ သို့သော်ပိုကောင်းသည်။
သင့်သူငယ်ချင်းကိုချစ်သောချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြင့်ကွဲပြားသောနှုတ်ခွန်းဆက်သရန်ကူညီပေးမည့်ရယ်စရာမွေးနေ့ကဒ်များစွာရှိသည်။ ဤဂုဏ်ပြုလွှာများ၌လည်းထူးခြားသည့်အရာတစ်ခုရှိသည်။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်လက်ရေးဖြင့်၎င်းတို့အပေါ်သင်ရေးသားနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ဟာဒီဂျစ်တယ်နည်းနဲ့ရေးတာပိုများလာတယ်ဆိုတာမှန်ပေမယ့်လက်နဲ့ရေးတဲ့အလွန်အရေးကြီးတဲ့အနှစ်သာရကိုဘယ်တော့မှမပျောက်စေရပါဘူး။ ခံစားချက်များကိုစာလုံးများဖြင့်ဖော်ပြရန်သူတို့ပျော်စရာကောင်းလျှင်ပင်။
နှုတ်ခွန်းဆက်ဘို့ 15 ရယ်စရာမက်ဆေ့ခ်ျကိုစိတ်ကူးများ
သင်ကပျော်စရာကောင်းပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသည်။ သင်၏မွေးနေ့သည် 'ဖြစ်' လျှင်ပါတီပွဲလာမည်။
သူငယ်ချင်းများကြားတွင်ရိုးသားမှုရှိသင့်သည်ဟုသူတို့ပြောကြသည်။ ခါးသီးစရာမလိုပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်…အိုပါတယ်။ အဖိုးအဖွားနဲ့ထပ်တွေ့ ဦး မယ်။
သင့်အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲဟုမေးသောအခါ၊ သင်သည်“ ၁၈” ဟုအမြဲတမ်းဖြေနိုင်ကြောင်းသတိရပါ။ သင်အမှန်တကယ်တွင်အတွေ့အကြုံ (၁၈) ခုနှင့် (၃၂) ယောက်ရှိသည်။ ဂုဏ်ယူပါတယ်၊ ခင်ဗျားအသက် ၅၀ ပြည့်ပါပြီ။
ပျော်ရွှင်ဖွယ်မွေးနေ့ဖြစ်ပါစေ၊ သို့သော်သင်ဟာဝိုင်တစ်ခုသာဖြစ်ရင်နှစ်တွေစုဆောင်းဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာနောက်နေတာပါ။ မင်းကဝိုင်လိုပါပဲ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းသင့်တွင်ပိုကောင်းသည့်အရံရှိသည်။
ငါဒီနှစ်မှာမင်းကိုဘာမှမပေးဘူးဆိုရင်စိတ်မဆိုးပါနဲ့၊ နောက်နှစ်အတွက်ငွေစုတော့မယ်။ ပျော်ရွင်ဖွယ်ရာမွေးနေ့!
ပျော်ရွင်ဖွယ်ရာမွေးနေ့! လက်ဆောင်လိုမျိုးအပေါ်ယံနှင့်ရုပ် ၀ တ္ထုများကိုအရေးပါမှုပေးသည့်ရင့်ကျက်မှု၊ ခေတ်မီဆန်းပြားမှု၊ နက်ရှိုင်းမှုတို့ကြောင့်သင့်ကိုချီးကျူးပါတယ်။
မင်းမွေးနေ့မှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေပါ၊ ဒါပေမယ့်သတိထားပါ၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ခင်ဗျားအရင်ကမဟောင်းခဲ့ဖူးလို့ပါ။ ပျော်ရွင်ဖွယ်ရာမွေးနေ့။
ဖုံးကွယ်မထားပါနဲ့! 'taitantos' ရှိခြင်းသည်သင့်အတွက်အလွန်သင့်တော်သည်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ » နည်းလမ်း » ရယ်စရာမွေးနေ့ပွဲ
ပျော်ရွှင်ခြင်းနှင့်အတူနိုးထရန်ကောင်းသောမင်္ဂလာနံပါတ် (၅၀) စကားလုံး